बुल्गेरियाको एउटा यस्तो बजार जहाँ श्रीमती खरिद गरिन्छ – BRTNepal
काठमाडौं: २३:५० | Colorodo: 11:05
बुल्गेरियाको एउटा यस्तो बजार जहाँ श्रीमती खरिद गरिन्छ
बिआरटीनेपाल २०७६ पुष २६ गते ८:२६ मा प्रकाशित
बुल्गेरियाको स्टारा जागोरमा वर्षको तीन पटक ‘श्रीमती’को मेला लाग्ने गर्छ । जहाँ युवतीहरू आफूलाई बिहे गर्ने श्रीमानको खोजीमा हुन्छन् । अंग्रेजी अखबार डेली मेलका अनुसार बुल्गेरियाको यो ठाउँमा वर्षमा ३ पटक यस्तो बजार लाग्छ जहाँ श्रीमतीहरू किन्न पाइन्छ ।
एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशक पूरा हुँदा पनि त्यहाँ परम्परागत मान्यताका आधारमा श्रीमती खरिद बिक्री हुने गर्छ । जहाँ युवतीहरू आफ्नो परिवारका साथमा सिंगारपटार गरेर सहभागी हुन्छन् ।
उनीहरूलाई खरिद गर्न युवकहरू बजारमा आउँछन् र मन परेकी युवतीलाई श्रीमती बनाएर लैजान्छन् । यस्तो बजार वर्षौं देखि चलीआएको रितिरिवाजसँग सम्बन्धित छ । स्थानीय सरकारी अधिकारीहरूले पनि यस्तो प्रथा रोक्न सकिरहेका छैनन् ।
‘जसले आफ्नो छोरीको बिहे गर्न सक्दैन उ यहीं बजारमा आएर श्रीमान खोजेर लैजाने गर्छ,’ एक अधिकारीले स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन् ‘हामीसँग यो प्रथालाई रोक्ने कुनै कारण छैन । नागरिकहरू गरीब छन् । यहाँ बिहेका लागि धेरै खर्च हुने गर्छ ।’
बेल्जियममा एउटै परेवा झण्डै २३ करोड रुपैयामा बिक्री
मिस नेपाल २०२० का प्रतिस्पर्धीहरुको पीसीआर परीक्षण गरियो
जाडोमा हिटर बालेर सुत्दा जान सक्छ ज्यान !
तिहारमा रंगोली बनाउने सजिलो तरिका
थाहा पाउनुहोस् मान्छे रुनुका ५ कारण
घरमा प्रयोग नहुने वस्तुहरु दानमा दिनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक
सफलता प्राप्त गर्न के गर्ने ? पढ्नुहोस् चाणक्यका ६ नीति
३१ अक्टोबरमा देखिन लागेको ‘ब्लु मून’ के हो ?
इन्स्टाग्रामबाट अबदेखि चार घन्टा ‘लाइभ’ गर्न मिल्ने